EU katọrọ ịkpa ókè LGBT + ka Hungary na-ewepụta iwu arụmụka ọhụrụ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Hungary na -agbasa akụkọ » EU katọrọ ịkpa ókè LGBT + ka Hungary na-ewepụta iwu arụmụka ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hungary na -agbasa akụkọ • LGBTQ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Akwụkwọ ozi ahụ kwuru na "nkwanye ùgwù na nnagide bụ isi ihe ọrụ European," ma kwe nkwa "ịnọgide na-alụ ọgụ megide ịkpa ókè megide ndị LGBTI."
Nkwanye ùgwù na ndidi bụ isi nke ọrụ Europe.
Edere akwụkwọ ozi a na elu ọla nke EU wee bịa n'ihu International LGBT + Pride Day na June 28.
Akwụkwọ ozi ahụ nwere aha iri na isii, mana onye isi ọchịchị Austria bụ Sebastian Kurz tinyekwara mbinye aka ya mgbe ewepụtara akwụkwọ ozi ahụ, na-ewetara ọnụ ọgụgụ ndị bịanyere aka na 16.
Isi nke 17 European Union (EU) na-ekwu na akwụkwọ ozi jikọtara ọnụ na-akwado nkwenye ha maka ịlụ ọgụ megide ịkpa ókè LGBT +.
E bipụtara akwụkwọ ozi ahụ otu ụbọchị mgbe EU Commission kwere nkwa ịgba akwụkwọ megide Hungary maka iwu ọhụrụ mgbochi LGBT +, ọ bụ Luxembourg Prime Minister Xavier Bettel zigara ya na Twitter.
N’etiti ndị bịanyere aka na ya bụ onye isi ala France bụ Emmanuel Macron, onye isi ala German Angela Merkel, ndị praịm minista n’ oftali na Spen, tinyekwara ndị isi nke steeti Scandinavia na Baltic, tinyere ndị ọzọ.
A na-edegara leta ahụ nnukwu ọla nke EU ma na-abịa n'ihu International LGBT + Pride Day na June 28. Ọ naghị akpọ Hungary aha n'ụzọ doro anya, mana ọ na-abịa otu ụbọchị mgbe European Commission kwere nkwa usoro iwu megide Hungary, yana onye isi oche kọmitii ahụ, Ursula von der Leyen, na-akpọ ọhụụ ọhụrụ nke Hungary LGBT + iwu “a ihere.”
E wepụtara akwụkwọ a ka ndị isi EU ga-ezukọ na Brussels maka ọgbakọ maka ịkọwa maka “nsogbu ụwa na nsogbu gbasara ọchịchị.” Mgbe ọ bịarutere na ihe omume ahụ, Mịnịsta Ala Hungary Viktor Orban gbachitere iwu na-ese okwu, nke ndị omeiwu obodo ahụ nyefere n'izu gara aga, nke machibidoro ihe ụlọ akwụkwọ ịgụnye ọdịnaya LGBT + maka ụmụaka.
Ndị omeiwu nke Hungary tinyere iwu ahụ n'izu gara aga, mana ọ ga-abụrịrị onye isi ala kwadoro ka ọ rụọ ọrụ. Ọ machibidoro ịkesa ọdịnaya na mmekọ nwoke na nwoke ma ọ bụ mmezigharị mmekọahụ nye ndị nọ n'okpuru afọ 18 na mmemme agụmakwụkwọ banyere mmekọahụ, ihe nkiri ma ọ bụ mgbasa ozi. Gọọmentị kwuru na ọ bụ iji chebe ụmụaka mana ndị na-akatọ iwu a na-ekwu na ọ na-ejikọ nwoke idina nwoke na pedophilia.
Onye isi ala German bụ Angela Merkel kwuru na ya chere na "iwu a ezighi ezi, na o kwekọghị n'echiche m banyere ndọrọndọrọ ọchịchị - ọ bụrụ na ị kwe ka nwoke idina ụdị onwe, mmekọ nwoke na nwoke ma machibido ozi gbasara ha ebe ọzọ, nke a metụtara nnwere onwe agụmakwụkwọ na dị ka. ”
“Iwu ahụ akwadola. Ọ bụghị banyere nwoke idina nwoke, ọ bụ maka agụmakwụkwọ ka ọ bụ ihe gbasara ndị nne na nna, ”Orban gwara ndị mgbasa ozi.
Iwu a bụ akụkụ nke ụgwọ ka ukwuu nke na-agbaso mpụ mpụ megide ụmụaka, ma kpalite mkpesa siri ike site na Brussels dị ka ihe iyi egwu nke ụkpụrụ European. Ndị nkatọ na-ekwu na ụgwọ ahụ na-akpa oke ma na-emejọ ndị obodo LGBT +. Hungary agbachitere ndokwa ndị otu na-achị achị na ndị mmegide kwadoro. Ọ na-ekwusi ike na iwu "na-echebe ikike ụmụaka" ma gọnarị na ọ bụ ịkpa oke.
Gọọmentị Mịnịsta Ala Viktor Orban boro von der Leyen ebubo na ọ na-ebo "ebubo ụgha" wee kwuo na ụgwọ ahụ "enweghị ihe ọ bụla na-akpa oke" n'ihi na "anaghị emetụta ikike nghazi mmekọahụ nke ndị gafere afọ 18."
Nzukọ EU na-ezukọ na Brussels na Thursday a na Fraịde, iji kwurịta COVID-19, mgbake akụ na ụba, Mbugharị, na mmekọrịta ndị ọzọ, dị ka usoro iwu si kwuo.
Ndi mmadu 59 nwụrụ, ihe karịrị 1000 na-efu dị ka ọdachi ...